Coronavirus - Ministry of Health (MOH) Myanmar
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ်-၁၉ သည်အသစ်တွေ့ရှိသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်ဖြစ်သော SARS-2 Corona virus -19 ကြောင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ၏ထင်ရှားသောလက္ခဏာများသည် အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ မည်သည့်အထူးကုသမှုမှမရှိဘဲပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်သည်။ သို့သော်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ကင်ဆာစသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများရှိသောလူများကဲ့သို့သောအန္တရာယ်မြင့်မားသောလူ များတွင် ပိုမိုပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်တံတွေးမျက်ရည်များ နှာချေခြင်းများမှတဆင့်ကူးစက်နိူင်သည်။
Now COVID-19 third wave hit hard to people of Myanmar. Precaution and prevention of COVID-19 is necessary, please follow COVID-19 knowledge center facebook page for more information. https://facebook.com/ckcmohnugmm
ပြည်သူလူထုအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု၊ သေဆုံးမှုများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း စီမံမှုများအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူများအနေဖြင့် ၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလမှ ယခုအချိန်အတွင်း မိမိကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) မိမိ၏ အတူနေ မိသားစုအတွင်း ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးခြင်း (သို့မဟုတ်) သေဆုံးခဲ့ခြင်း ရှိပါက ပူးပေါင်းပါဝင်ဖြေဆိုပေးစေလိုပါသည်။
ယခု ပြသထားသော အချက်အလက်များသည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကောက်ခံခဲ့သည့် "ပြည်သူလူထုအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာ စစ်တမ်း” မှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ပြသထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တမ်းတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သူများ၊ COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူများ၏ အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။
ဖေဖဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဆုတ်ယုတ်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုတိုင် ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးမှု အလွန်နည်းပါးလျက်ရှိပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် အလှူငွေများစွာလိုအပ်လျက်ရှိရာ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသော စေတနာရှင်များအား လေးစားစွာနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသောစေတနာရှင်များ အောက်ပါ လှူဒါန်းမည် ကိုနှိပ်၍ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Coronavirus Management Guidelines
ဇွန် ၁၇, ၂၀၂၂
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (17-6-2022) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးများကို တစ်စုတည်းဖတ်ရှုရန်-https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/ တယ်လီကျန်းမာ အခမဲ့အွန်လိုင်းဆေးခန်း (8 AM –...
မေ ၃၁, ၂၀၂၂
🦠 COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (30-5-2022) 🦠 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၃.၇...
မေ ၁၄, ၂၀၂၂
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၁၄-၅-၂၀၂၂) 🦠 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၃.၈ သန်းကျော်...
ဧပြီ ၂၉, ၂၀၂၂
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၂၉-၄-၂၀၂၂) To download poster : Click Here လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/ Ministry of Health,...
ဧပြီ ၁၀, ၂၀၂၂
COVID-19 Management Guidance for Children To download PDF – Click Here လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/ Ministry of Health,...
ကျန်းမာစွာ တော်လှန်ဖို့ … COVID-19 ကို အနိုင်ယူစို့ (March 2022) – သည်ခေတ်နေ (ရုပ်/သံ)
မတ် ၂၅, ၂၀၂၂
ကျန်းမာစွာ တော်လှန်ဖို့ … COVID-19 ကို အနိုင်ယူစို့ (March 2022) ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေ Omicron နှင့် COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးများကို တစ်စုတည်းကြည့်ရှုရန်-...